မိန်းကလေးတွေအတွက် အကြီိးအကျယ်စိတ်ထိခိုက်စေတဲ့စကားတွေ – Trend.com.mm
Posted on June 10, 2018 June 8, 2018 by San Wadi Hnin
နှုတ်ချို လျိုတစ်ပါးတဲ့၊နှုတ်ကောင်းရင် နတ်ကောင်းစောင်မတယ် တဲ့၊ နှုတ်ကြောင့်ကြေ လက်ကြောင့်သေ တဲ့ စသဖြင့် လောကကြီးမှာ အလွယ်ဆုံးလုပ်ဆောင်မှုဖြစ်တဲ့ စကားပြောခြင်းဟာ အကြီးမားဆုံးထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုယူဆောင်လာနိုင်တဲ့အပြင် ကြီးမားတဲ့အကူအညီတွေကိုပါရစေနိုင်ကြောင်း ပြောထားတဲ့သာဓကစကားပုံတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ အဲဒီိလိုအရေးကြီိးတဲ့စကားပြောခြင်းအမှုကိုယောက်ျားလေးအများစုက လက်လွတ်စပယ်လုပ်ဆောင်လေ့ရှိကြပေမယ့် သူတို့နဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနေရတဲ့မိန်းကလေးတွေအတွက်တော့ စကားတစ်ခွန်းကလည်းအရှိုက်ကိုထိတဲ့မြှားတစ်စင်းပါပဲ။ အဲ့ဒါကိုယောက်ျားလေးတွေကတော့ အမှတ်တမဲ့ပဲဖြစ်နေမှာပါ။ အဲ့ဒီိလိုကိစ္စတွေများသထက်များလာပြီးမိန်းကလေးဘက်ကမခံနိုင်တော့ဘူးဆိုမှ မင်းတို့မိန်းမတွေကသိပ်စကားများတာပဲဆိုတာတွေဖြစ်ပါလေရော။ ကာကွယ်ခြင်းသည်ကုသခြင်းထက်ပို၍ကောင်းသည်လို့ဆိုတယ်မဟုတ်လား။ဒါကြောင့် အမှတ်တမဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် မပြောမိအောင်သတိထားနိုင်စေဖို့ သင့်ချစ်သူကောင်မလေးအတွက်အကြီးအကျယ်စိတ်ထိခိုက်စေမယ့်စကားတွေကိုိဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
This is obvious. ဘယ်မိန်းကလေးမှ ကိုယ့်ကောင်လေးကအခြားကောင်မလေးတစ်ယောက်ကိုချီးမွမ်းနေတာကိုစိတ်သန့်သန့််နဲ့ထိုင်နားမထောင်နေနိုင်ကြပါဘူး။ သင့်ဘက်က တကယ်ချီးမွမ်းဖို့လိုအပ်နေတယ်ဆိုရင်တောင်မှ သိပ်ပြီးပုဂ္ဂိုလ်ရေးမဆန်စေဖို့သတိပြုပါ။ မဟုတ်ရင်တော့ သင့်ကောင်မလေးက သူ့ကိုယ်သူ အဲ့ဒီမိန်းကလေးလောက်မတော်ဘူးထင်ပြီး အားမလိုအားမရစိတ်တွေနဲ့သိမ်ငယ်နေပါလိမ့်မယ်။
သင့်ကောင်မလေးရဲ့အကြံညဏ်ဟာသင့်အတွက်တော့ child play လောက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေပါလိ့မ်မယ်။သင်တို့နှစ်ယောက်ကအသက်ကွာတယ်ဆိုရင်ပိုဆိုးပါတယ်။ သင့်ကောင်မလေးက ကလေးဆန်မယ်၊သူ့အကြံပေးချက်တွေကလည်းကလေးဆန်မယ်။ဒါပေမယ့် ဘယ်တော့မှ “မင်းက ကလေးဆန်လိုက်တာကွာ၊အဓိပ္ပါယ်မရှိတာတွေမပြောစမ်းနဲ့”ဆိုတဲ့စကားမျိုးမပြောမိပါစေနဲ့။ဘယ်တော့မှပါ။ မဟုတ်ရင်တော့ အဲ့ဒီအခိုက်အတန့်ဟာ နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာတဲ့တိုင်အောင်သူု့စိတ်ထဲမှာစွဲမြဲကျန်ရစ်နေပါလိမ့်မယ်။
သင့်မျက်စိထဲမှာ သင့်ကောင်မလေးဟာ စတွေ့တုန်းကထက်အနည်းငယ်ပိုပြီိးဝကောင်းဝလာနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုသင်ကပဲသတိပြုမိပြီးသူမကသတိမပြုမိတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ဆို သူမက သင့်ကိုချစ်နေရတာနဲ့ပဲအလုပ်များနေတာကြောင့်ပါ။ အဲ့ဒီ့အခါသင်က “နည်းနည်းဝလာတယ်ထင်တယ်နော်”ဆိုတာမျိုးဘယ်တော့မှမပြောပါနဲ့။ သူဝလာတာဟာ သင်ကစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားလို့ပါ။ သူ့ရဲ့ဝဖြိုးမှုဟာ သင့်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့တိုက်ရိုက်အချိုးကျတာမို့ သူဝလေလေသင့်အတွက်ဂုဏ်ယူဖို့ကောင်းလေလေပါပဲ။ (ရေးတဲ့လူကဆလင်းဘော်ဒီပါနော်၊တော်ကြာဝသူအချင်းချင်းရိုင်းပင်းတယ်ထင်နေမစိုးလို့)
ဒါကတော့ မမတွေကိုချစ်သူတော်ထားသူတွေအတွက်ပါ။ မိန်းကလေးတွေဟာသူတို့အသက်ကြီးနေပြီဆိုတာကို သူတို့ဘာသာသိကြပါတယ်။ “ကလေးကလားတွေလုပ်မနေနဲ့ အသက်ကိုိလည်းကြည့်ဦး”ဆိုတဲ့စကားမျိုးဟာ သူတုို့နှလုံးသားကို ချွန်မြိနေတဲ့လှံဦးဖျားနဲ့ထိုးစိုက်ခံလိုက်ရသလို နာကျည်းခံစားရစေပါတယ်။ (တကယ်ပါ) နောက်တစ်ခုက မိန်းကလေးတွေဟာ အသက်သုံးဆယ်မကလုို့ ကိုးဆယ့်သုံးနှစ်ပဲရောက်နေပါစေ ကလေးဆန်ချင်တုန်း အချစ်ခံချင်တုန်းပါပဲ။
မိန်းကလေးတွေဟာ နဂိုကတည်းကမိခင်စိတ်ရှိတာကြောင့်ရော သဘာဝအားဖြင့်ပါ များသောအားဖြင့် မိသားစုကိုသံယောဇဉ်ကြီးတတ်ကြပါတယ်။ သူ့မိသားစုကိုရှက်ဖွယ်လိလိလို့ထင်မြင်သူတွေကို သူကပက်သက်လိုိစိတ်မရှိပါဘူး။ဘယ်လောက်ပဲချစ်ချစ်ပါ။ ဒါကြောင့်သင့်အနေနဲ့ပါးစပ်ကထုတ်မပြောရင်တောင်မှ သူ့မိသားစုကိုရှက်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ထင်တဲ့အမူအရာတစ်ခုခုပြခဲ့မိရင် သူမကသင့်ကိုတစ်သက်လုံးစိတ်နာနေတော့မှာပါ။
ဒါတွေကတော့ သင်ချစ်တဲ့မိန်းကလေးကိုဘယ်တော့မှမပြောသင့်တဲ့စကားတွေပါပဲ။ မိန်းကလေးတွေရဲ့အချစ်ကကြောက်ဖို့ကောင်းလောက်အောင်ခိုင်မာတာမို့ သူမကသင့်ကိုဘယ်လောက်ပဲသည်းခံနေတယ်ဆိုပါစေ သင်ကဒီစကားတွေကိုထပ်တလဲလဲပြောနေမယ်ဆိုရင်တော့သင့်ကိုလှည့်မကြည့်စတမ်းထားပစ်ခဲ့တော့မှာပါ။နောက်ပြီိး မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုလမ်းခွဲချင်ရင်ဒီစကားတွေမပြောပါနဲ့။ ဒဲ့ပဲ လမ်းခွဲချင်တဲ့အကြောင်းပြေပြေလည်လည်ပြောပါ။မိန်းမအများစုဟာ ကိုယ့်ကိုမချစ်တဲ့သူအနားမှာတွယ်ကပ်နေမယ့်ငတုံးတွေမဟုတ်ကြပါဘူး။
နှုတခြွို လွိုတစပြါးတဲ့၊နှုတကြောငြးရငြ နတကြောငြးစောငမြတယြ တဲ့၊ နှုတကြှောငြ့ကှေ လကကြှောငြ့သေ တဲ့ စသဖှငြ့ လောကကှီးမှာ အလှယဆြုံးလုပဆြောငမြှုဖှစတြဲ့ စကားပှောခှငြးဟာ အကှီးမားဆုံးထိခိုကပြကွစြီးမှုတှကေိုယူဆောငလြာနိုငတြဲ့အပှငြ ကှီးမားတဲ့အကူအညီတှကေိုပါရစနေိုငကြှောငြး ပှောထားတဲ့သာဓကစကားပုံတှအမွေားကှီးရှိပါတယြ။ အဲဒီိလိုအရေးကှီိးတဲ့စကားပှောခှငြးအမှုကိုယောကြွားလေးအမွားစုက လကလြှတစြပယလြုပဆြောငလြရှေိ့ကှပမယြေ့ သူတို့နဲ့ပေါငြးသငြးဆကဆြံနရတေဲ့မိနြးကလေးတှအတှေကတြော့ စကားတစခြှနြးကလညြးအရှိုကကြိုထိတဲ့မှားတစစြငြးပါပဲ။ အဲ့ဒါကိုယောကြွားလေးတှကတေော့ အမှတတြမဲ့ပဲဖှစနြမှောပါ။ အဲ့ဒီိလိုကိဈစတှမွေားသထကမြွားလာပှီးမိနြးကလေးဘကကြမခံနိုငတြော့ဘူးဆိုမှ မငြးတို့မိနြးမတှကသေိပစြကားမွားတာပဲဆိုတာတှဖှစေပြါလရေော။ ကာကှယခြှငြးသညကြုသခှငြးထကပြို၍ကောငြးသညလြို့ဆိုတယမြဟုတလြား။ဒါကှောငြ့ အမှတတြမဲ့ပဲဖှစဖြှစြ မပှောမိအောငသြတိထားနိုငစြဖေို့ သငြ့ခစွသြူကောငမြလေးအတှကအြကှီးအကယွစြိတထြိခိုကစြမယြေ့စကားတှကေိုဖောပြှပေးလိုကပြါတယြ။
This is obvious. ဘယမြိနြးကလေးမှ ကိုယြ့ကောငလြေးကအခှားကောငမြလေးတစယြောကကြိုခွီးမှမြးနတောကိုစိတသြနြ့သနြ့နြဲ့ထိုငနြားမထောငနြနေိုငကြှပါဘူး။ သငြ့ဘကကြ တကယခြွီးမှမြးဖို့လိုအပနြတယေဆြိုရငတြောငမြှ သိပပြှီးပုဂျဂိုလရြေးမဆနစြဖေို့သတိပှုပါ။ မဟုတရြငတြော့ သငြ့ကောငမြလေးက သူ့ကိုယသြူ အဲ့ဒီမိနြးကလေးလောကမြတောဘြူးထငပြှီး အားမလိုအားမရစိတတြှနေဲ့သိမငြယနြပေါလိမြ့မယြ။
သငြ့ကောငမြလေးရဲ့အကှံညဏဟြာသငြ့အတှကတြော့ child play လောကဖြှစကြောငြးဖှစနြပေါလိ့မမြယြ။သငတြို့နှစယြောကကြအသကကြှာတယဆြိုရငပြိုဆိုးပါတယြ။ သငြ့ကောငမြလေးက ကလေးဆနမြယြ၊သူ့အကှံပေးခကွတြှကလေညြးကလေးဆနမြယြ။ဒါပမယြေ့ ဘယတြော့မှ “မငြးက ကလေးဆနလြိုကတြာကှာ၊အဓိပျပါယမြရှိတာတှမပှေောစမြးနဲ့”ဆိုတဲ့စကားမွိုးမပှောမိပါစနေဲ့။ဘယတြော့မှပါ။ မဟုတရြငတြော့ အဲ့ဒီအခိုကအြတနြ့ဟာ နောငနြှစပြေါငြးမွားစှာကှာတဲ့တိုငအြောငသြူု့စိတထြဲမှာစှဲမှဲကနွရြစနြပေါလိမြ့မယြ။
သငြ့မကွစြိထဲမှာ သငြ့ကောငမြလေးဟာ စတှတေု့နြးကထကအြနညြးငယပြိုပှီိးဝကောငြးဝလာနိုငပြါတယြ။အဲ့ဒါကိုသငကြပဲသတိပှုမိပှီးသူမကသတိမပှုမိတာလညြးဖှစနြိုငပြါတယြ။ဘာကှောငြ့ဆို သူမက သငြ့ကိုခစွနြရတောနဲ့ပဲအလုပမြွားနတောကှောငြ့ပါ။ အဲ့ဒီ့အခါသငကြ “နညြးနညြးဝလာတယထြငတြယနြော”ဆိုတာမွိုးဘယတြော့မှမပှောပါနဲ့။ သူဝလာတာဟာ သငကြစိတခြမြွးသာအောငထြားလို့ပါ။ သူ့ရဲ့ဝဖှိုးမှုဟာ သငြ့ရဲ့စှမြးဆောငရြညနြဲ့တိုကရြိုကအြခွိုးကတွာမို့ သူဝလလသေငြေ့အတှကဂြုဏယြူဖို့ကောငြးလလပေေါပဲ။ (ရေးတဲ့လူကဆလငြးဘောဒြီပါနြော၊တောကြှာဝသူအခငြွးခငြွးရိုငြးပငြးတယထြငနြမစေိုးလို့)
ဒါကတော့ မမတှကေိုခစွသြူတောထြားသူတှအတှေကပြါ။ မိနြးကလေးတှဟောသူတို့အသကကြှီးနပှေီဆိုတာကို သူတို့ဘာသာသိကှပါတယြ။ “ကလေးကလားတှလေုပမြနနေဲ့ အသကကြိုလညြးကှညြ့ဦး”ဆိုတဲ့စကားမွိုးဟာ သူတုို့နှလုံးသားကို ခွှနမြှိနတေဲ့လှံဦးဖွားနဲ့ထိုးစိုကခြံလိုကရြသလို နာကညြွးခံစားရစပေါတယြ။ (တကယပြါ) နောကတြစခြုက မိနြးကလေးတှဟော အသကသြုံးဆယမြကလုို့ ကိုးဆယြ့သုံးနှစပြဲရောကနြပေါစေ ကလေးဆနခြငွတြုနြး အခစွခြံခငွတြုနြးပါပဲ။
မိနြးကလေးတှဟော နဂိုကတညြးကမိခငစြိတရြှိတာကှောငြ့ရော သဘာဝအားဖှငြ့ပါ မွားသောအားဖှငြ့ မိသားစုကိုသံယောဇဉကြှီးတတကြှပါတယြ။ သူ့မိသားစုကိုရှကဖြှယလြိလိလို့ထငမြှငသြူတှကေို သူကပကသြကလြိုစိတမြရှိပါဘူး။ဘယလြောကပြဲခစွခြစွပြါ။ ဒါကှောငြ့သငြ့အနနေဲ့ပါးစပကြထုတမြပှောရငတြောငမြှ သူ့မိသားစုကိုရှကဖြို့ကောငြးတယလြို့ထငတြဲ့အမူအရာတစခြုခုပှခဲ့မိရငြ သူမကသငြ့ကိုတစသြကလြုံးစိတနြာနတေော့မှာပါ။
ဒါတှကတေော့ သငခြစွတြဲ့မိနြးကလေးကိုဘယတြော့မှမပှောသငြ့တဲ့စကားတှပေါပဲ။ မိနြးကလေးတှရေဲ့အခစွကြကှောကဖြို့ကောငြးလောကအြောငခြိုငမြာတာမို့ သူမကသငြ့ကိုဘယလြောကပြဲသညြးခံနတယေဆြိုပါစေ သငကြဒီစကားတှကေိုထပတြလဲလဲပှောနမယေဆြိုရငတြော့သငြ့ကိုလှညြ့မကှညြ့စတမြးထားပစခြဲ့တော့မှာပါ။နောကပြှီိး မိနြးကလေးတစယြောကကြိုလမြးခှဲခငွရြငဒြီစကားတှမပှေောပါနဲ့။ ဒဲ့ပဲ လမြးခှဲခငွတြဲ့အကှောငြးပှပှလေညေလြညပြှောပါ။မိနြးမအမွားစုဟာ ကိုယြ့ကိုမခစွတြဲ့သူအနားမှာတှယကြပနြမယြေ့ငတုံးတှမဟေုတကြှပါဘူး။